‘महाभियोग प्रकरण अलौ पर्वजस्तो’ - संवाद - नेपाल
‘महाभियोग प्रकरण अलौ पर्वजस्तो’
६४ वर्षअघि जन्मिए, प्रकाश वस्ती । त्यसबेला उनका पिता तत्कालीन प्रधान न्यायालयका विचारी थिए । विचारीका छोरा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुलाई ठूलै उपलब्धि मान्छन् वस्ती । चार न्यायाधीशलाई स्थायी नगरिएपछि ७ माघ ०६९ मा उनीसहित चारै जना निवृत्त भए । तर, दबाबका कारण निवृत्तिको ८४ दिनपछि एक वर्षका लागि उनीहरू अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा पुन: बहाल भए । तर, स्थायी नभएपछि ३० चैत ०७० मा चारै जनालाई सर्वोच्च अदालतबाट सडकको बाटो देखाइयो । तिनैमध्येका एक न्यायाधीश थिए, वस्ती । उनैसँग त्यो अपमानजनक बहिर्गमन, न्यायालय र भ्रष्टाचार अनि हाम्रो सामाजिक प्रवृत्तिमाथि केन्द्रित रहेर नेपालले लामो कुराकानी गरे, १४ मंसिरमा । त्यसैको सम्पादित अंश :
न्यायाधीशबाट नफालिएको भए, आजका दिनमा तपाईं मुलुकको प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । यसलाई प्रारब्धको खेल ठान्नुहुन्छ वा अरू केही ?
यो नियतिको खेल रहेछ । म प्रधानन्यायाधीश भइसकेको भन्दा पनि हुन्छ । नभएको एउटा कारण म आफैँ पनि हुँ । त्यसबेला न्यायपरिषद्को अध्यक्ष अनुपराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो भने सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ । श्रेष्ठले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर ‘तपाईं स्थायी (न्यायाधीश) हुने विषयमा के विचार छ ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले जवाफमा उहाँलाई ‘अदालत भनेको पद्घतिले चलेको हुँदा त्यसलाई भताभुंग बनाउनु हुँदैन’ भनेँ । त्यसबेला उहाँले ‘तपाईंलाई स्थायी नचाहिएको ? तपाईंका धेरै दुस्मन छन् नि !’ भन्नुभयो । शर्माले पनि ‘तिमीलाई स्थायी हुनुपरेको छैन ?’ भन्नुभयो । मैले उहाँलाई पनि पद्घतिकै कुरा सम्झाएँ । मलाई आत्मविश्वास के थियो भने ‘रोल नम्बर १६ हो, स्थायी भइहाल्छु’ भन्ने थियो । अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने अस्थायीबाटै फालिएका साह्रै कम उदाहरण छन् । सायद म त्यसबेला बढी नै आदर्शवादी, अव्यावहारिक वा मूर्ख भएछु ।
तपाईंलगायत चार जना न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा रहन नदिन एक ढंगले कोतपर्व नै मच्चाइयो पनि भनिन्छ । यो हदसम्म गर्नुपर्ने कारण के थियो ? यसको आभास तपार्इंलाई थिएन ?
जब न्यायाधीशको पद खाली भयो, त्यतिबेला मलाई पूर्वाभास भएको हो । मेरा अनन्य मित्र भरतराज उप्रेतीले न्यायपरिषद्का केही सदस्यहरूसँग कुरा गर्नुभयो । हामीलाई स्थायी नबनाइने संकेत त्यहीँबाट प्राप्त भइसकेको थियो ।
त्यस प्रसंगमा एउटा घटना छ, त्यसले नै सबै कुरा बताउँछ । मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश पदको शपथग्रहण गरेर सर्वोच्च अदालत आउनुभयो । शपथपछि रजिस्ट्रारसमेतलाई बाहिर राखेर न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना योजना सुनाउने चलन छ । त्यही हुँदै थियो । दुई जना अट्ने सोफामा म र गिरीशचन्द्र लाल बसेका थियौँ । त्यस दिन हामी २० जना न्यायाधीश थियौँ त्यहाँ । रायमाझीले आफ्नो योजना सुनाइरहँदा तेस्रो व्यक्तिको त्यहाँ प्रवेश भयो । उनी त्यहाँ प्रवेश गर्नका लागि आधिकारिक व्यक्ति थिएनन् । किनभने, उनी सर्वोच्चमा थिएनन्, कुनै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश मात्र थिए । तर, म र गिरीशजी बसेकै सोफामा आएर बसे । कार्यालय सहयोगीले मलाई ‘चिनी हालेको कि नहालेको चिया’ भनेर सोधे । मैले ‘चिनी भएकै चल्छ’ भनेँ । मसँगै बसेका तिनले ‘ए तपाईंलाई डायबिटिज छैन ?’ भनेर आश्चर्य प्रकट गरे । मैले भनेँ, ‘छैन ।’ ‘अनि, तपाईंलाई ब्लड प्रेसर त होला नि’ भने, मैले फेरि भनेँ, ‘छैन ।’ ‘युरिक एसिड त पक्कै होला’ भने । मलाई साह्रै रिस उठिरहेको थियो तर पनि सम्हालिएर भनेँ, ‘भगवान्को कृपाले आजसम्म कुनै रोग छैन, भोलि के हुन्छ भन्न सक्दिनँ ।’ म प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्नुको कारणको एउटा विम्ब हो, यो घटना ।
त्यसो भए तपाईं प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्नुको एउटा कारक तत्कालीन एक न्यायाधीश ?
मैले यो घटना तत्काल मेरा मित्र कल्याण श्रेष्ठलाई सुनाएँ । उहाँले भने अनुसार यो न्यायालय कस्तो क्षेत्र हो भने यहाँ त रोल नम्बर–१ को न्यायाधीश छिटो मरिदेओस् भनेर २ नम्बरले भन्छ । जिल्ला न्यायाधीशले बिहानभरि भगवान्लाई धूप हालेर पुनरावेदनको न्यायाधीश छिटो मरिदेओस् भन्छ । पुनरावेदनकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश छिटो मरिदिओस् भन्छ ।
तपाईंलाई कुनै एक बिचौलियाले फोन गरेर कुनै मुद्दाको काम गरिदिन भनेको तर तपाईंले नमानेकाले उसले ‘कसरी प्रधानन्यायाधीश होलास् ? प्रधानन्यायाधीश बनाउनेकहाँ चामल, दाल, घिउ त मैकहाँबाट जान्छ’ सम्म भनेको तपाईंले सार्वजनिक रूपमै सुनाउनुभयो । त्यो व्यक्तिचाहिँ को रहेछ ?
त्यो व्यक्तिले चितवनमा रहेको मेरो भाइलाई भेटेर ‘हामीसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीश भयो भने तेरो दाइलाई खर्बपति बनाउँछु, तँलाई अर्बपति बनाउँछु’ भनेछ । भाइले मलाई यो कुरा सुनायो । मैले उसलाई ‘मैले खान पाइनँ भने भिख मागेर खान्छु, बरू तैँसँग दुई छाक खाना मागौँला तर यो काम म गर्दिनँ’ भनेँ । मैले यो घटना २१ जना न्यायाधीशको फुल कोर्टमै पनि ‘फलानो व्यक्तिले मेरो भाइलाई यसो भनेछ’ भनेर सुनाएको छु । त्यो व्यक्तिले मलाई धम्की पनि दियो । मैले यो कुरा पनि प्रधानन्यायाधीशलगायतलाई भनेँ । त्यो मान्छे आफूलाई ‘पत्रकार हुँ’ भन्छ तर पत्रकार होइन । कालो कोट लगाएर अदालत जान्छ, ‘वकिल हुँ’ भन्छ, न्यायाधीशलाई धम्क्याउँछ । बिचौलिया भन्ने शब्द मैले ‘क्वाइन’ गरेको थिएँ । बिचौलियाहरूको एउटा बिचित्रको ग्याङ रहेछ । देखेको थिएँ, सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ तर अनुभूत गरेको थिइनँ, गरेँ ।
यो देशमा निष्ठावान् हुन्छु, इमानदारीपूर्वक न्याय दिन्छु भन्नेहरूले चेतावनी र चुनौती खेप्छन् । विशेष गरी न्याय क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भनिन्छ, सत्य हो त ?
रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । म न्यायाधीश थिएँ । मलाई ‘तुम्हारा जान खतरे मे है’ भनेर चिट्ठी नै आएको थियो । त्यो चिट्ठी अहिले पनि मसँग छ । श्रेष्ठले तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर त्यो चिट्ठी देखाउनुभएको थियो । यस्ता चेतावनी र चुनौती धेरै खेपियो ।
सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति सारा प्रबुद्घ वर्ग सडकमा आयो । आमनागरिक न्यायिक स्वतन्त्रताका निम्ति बोले । तर, न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले मौनता साँधे । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको हस्तक्षेप किन प्रिय लागेको होला ?
हामी आफ्नो अनुहार मात्र ऐनामा हेर्छौं । आफूलाई के फाइदा, के बेफाइदा हुन्छ भन्ने मात्र सोच्छौँ । आफूलाई यसले खेदेको थियो भनेर व्यक्तिमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण संस्थामाथि नै प्रहार गर्ने प्रवृत्ति छ । जुन बेला एकता चाहिन्थ्यो, त्यसबेला संस्था नै क्षयीकरण भएकाले बढी प्रहार भयो । न्यायपालिका अहिले न न्यायपालिकाजस्तो छ, न कार्यपालिका नै कार्यपालिकाजस्तो । न विधायिका नै विधायिकाजस्तो रह्यो । आजका दिनभन्दा हिजोका दिन राम्रा थिए कि भनेर सोच्नु दुर्भाग्य हो । हरेक दिन आजभन्दा भोलि राम्रो हुँदै जानुपर्छ ।
सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगलाई नेपालले कोतपर्व भनेको छ, म अलौ पर्वजस्तो भन्छु । भोलि स्वतन्त्र इतिहासकारहरू निस्किए भने यो घटनालाई कालो इतिहासका रूपमा लेख्नेछन् । यदि त्यसरी लेखिएन भने इतिहासले बाटो बिराउनेछ । त्यो किनुवा इतिहास हुनेछ ।
त्यो घटनामा न्यायपालिकाभित्र कार्यपालिका छिरेको हो कि न्यायपालिका आफैँ कार्यपालिकामा प्रवेश गरेको ?
कार्यपालिका सधैँ हैकम चलाउने नै हुन्छ । उसले अरूलाई गन्दैन । हामीकहाँ मात्र होइन, अरू देशमा पनि यस्तै हुन्छ । उखानै छ, ‘थैली दह्रो नगर्ने, छिमेकीलाई दोष दिने’ भन्ने । यसैले हामी नै दह्रो हुनुपर्छ । संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हो । यो कुरा बुझ्न नेताहरूले ढिलो गरे । संवैधानिक निकायहरू राज्यका अंग हुन्, सरकारका होइनन् । यस्ता निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।
हामीकहाँ न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप कुन विन्दुबाट प्रारम्भ भयो ?
न्यायपालिकामा हरिप्रसाद प्रधानको पहिलो कार्यकालका बेला राजनीति घुस्न खोज्यो तर पाएन । परिणाम प्रधानलाई हटाइयो । पहिले प्रधान न्यायालय थियो तर सबै संरचना यथावत् राखेर सर्वोच्च अदालत बनाइयो । प्रधान न्यायालयका सबै न्यायाधीश खारेज भए । पञ्चायतकालमा पनि राजदरबारसँग प्रतिकार गर्ने प्रधानन्यायाधीशहरू जन्मिए । विश्वनाथ उपाध्यायको नाम लिएनाँै भने त्यो विश्वनाथप्रति होइन, इतिहासप्रति नै अन्याय हुन्छ ।
एउटा फरक प्रसंग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तपाईंले विशेषज्ञका रूपमा ६ वर्ष काम गर्नुभयो । हाम्रा ठूला नेता, प्रशासक, व्यापारीका खातापाता पल्टाउनुभयो । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कस्तो पाउनुभयो ? के यसले सामाजिक स्वीकृति पाएकै हो ?
न्यायपालिका, बार, अख्तियार आदि निकायमा रहेर मैले करिब ४५ वर्ष काम गरेँ होला । त्यहाँबाट हेर्दा हामीकहाँ भ्रष्टाचार बढ्दै गयो, घट्न सकेन । पहिला भ्रष्टाचार कम थियो । किनभने, पाप लाग्छ कि भन्ने डर थियो । पितृको इज्जत जान्छ भन्ने थियो । अब त्यो धार्मिक आस्था लगभग शून्यमा पुगिसक्यो । आफ्नो कुनै काम गर्नका लागि भगवान्लाई केही चढाउनुपर्छ भन्ने संस्कारले पनि हामीलाई भ्रष्ट बनाएको हो । भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण डर भएन, उल्टो भर भयो । ‘म घूस खान्छु, मलाई संरक्षण गर्ने कोही छ, त्यसैले हजार अपराध हजार खत माफ हुन्छ’ भन्ने सोच्न थालियो । जबसम्म दण्डहीनताको संस्कार मौलाइरहन्छ, भ्रष्टाचार भइरहन्छ ।
प्रकाशित: मंसिर १८, २०७४
‘नेतृत्वको शिरबिन्दुबाट अन्यायको थालनी भएको छ’– झलनाथ खनाल
‘म जलेबीजस्तो फाइल घुमाउन्नँ’– दिगम्बर झा
‘राष्ट्रिय पार्टीको सोच पनि क्षेत्रीय’– हृदयेश त्रिपाठी
‘व्यापार घाटा डब्लुटीओले गराएको होइन’
‘मलाई बदनाम गराउने खेल’– प्रधानसेनापति क्षत्री
‘संसद्‌मा मजस्तो नेता को छ ?’— वामदेव गौतम
कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर हुँदैन : थापा
केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘प्रतिवेदनको मर्म बुझे भने नेकपाका कार्यकर्ता नै सडकमा आउँछन्’